VaZuma Vanoti VaMugabe naVaTsvangirai Ngavataurirane
Mutungamiri weSouth Africa, VaJacob Zuma, vanova mutongi gava weSADC pagakava riri muZimbabwe, vakurudzira mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, nemutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, kuti vawane nzira dzekushanda pamwe chete kuitira kuti hurumende yemubatanidzwa isaite zinyekenyeke.
Chipangamazano chaVaZuma, Muzvare Lindiwe Zulu, vanoti VaZuma vari kushushikana zvikuru nekunetsana kunotyisa kuri kuitika muhurumende yemubatanidzwa.
Muzvare Zulu vanoti VaZuma vari kushushikana zvikuru nekunetsana kuri muhurumende yemubatanidzwa.
Muzvare Zulu vanotiwo vari kushushikana nenyaya yekuti vatungamiri veZambia neMozambique, havasati vadoma vanhu vaviri vari kuda kunzi vashande nesangano reJOMIC sekurudziro yakaitwa neSADC Summit kuJohannesburg.
Asi vati havo South Africa haisi kuzodoma imwe nhengo sezvakataurwa neSADC, vachiti vayananisi vayo varipo vakakwana.
Asi semuratidzo wekusamira zvakanaka kwezvinhu muSADC, munyori mukuru wesangano iri, VaTomaz Salomao, vanoti semaziviro avo, nhengo dzichashanda neJOMIC kubva kuSADC Troika dzakatodomwa.
Vati havasati vaudzwa zviri pamutemo kuti South Africa haichadome mumwe munhu kunobatsira JOMIC. Asi vati kunyange ikadaro zvayo, hapana chakaipa.
Nhaurirano dzange dzichifanira kutanga neChishanu, asi dzazoregwa kuitwa sezvo zvipangamazano zvaVaZuma zvisina kukwainsa kuuya.
Vanotungamira Zanu-PF munhaurirano, VaPatrick Chinamasa, varamba kutaura nezvenhaurirano idzi. Asvanomiririra MDC-T munhaurirano, VaElton Mangoma, vanoti ichokwadi kuti nhaurirano dzambomiswa sezvo vanga vachifanirwa kunge vari mumisangano iyi vanga vasati vasvika.
Nyanzvi munyaya dzezvekudyidzana nedzimwe nyika, VaClifford Mashiri, vanoti VaZuma vave kurasika gwara kana vachiti VaMugabe vataurirane naVaTsvangirai.